မင်းကွန်း Pahtodawgyi စေတီတော် | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
နေအိမ်→မန္တလေး→မင်းကွန်း→မင်းကွန်း Pahtodawgyi စေတီတော်
အဆိုပါ မင်းကွန်း Pahtodawgyi စေတီတော် (ထို့အပြင်မင်းကွန်းစေတီတော်ဟုခေါ်တွင် & Mantara ကြီးစေတီတော်) ဒီနေ့သင်မြင်သောတစ်ဦး stupendous အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးဖြစ်ရပြီလိုအရာကိုရုံအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါသည်.
မင်းကွန်း Pahtodawgyi ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်စတင် 1799 နှင့်စဲ 1819 ဘိုးတော်ဘုရား၏သေမင်းနှင့်. ပြီးနောက် 20 နှစ်ပေါင်းသာပြင်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်နှင့်ကြီးမားသောအခြေစိုက်စခန်းချောခဲ့. အဆိုပါအဆောက်အဦထဲမှာအဓိကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုခံစားခဲ့ရ 1839 နှင့်နောက်ဆက်တွဲငလျင်များရှိသော်လည်းယခုအချိန်အထိရပ်နေရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်.
သင်စေတီတော်များ၏မျက်နှာစာညာဘက်ထောင့်မှာမှာ start အကယ်. ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမြင်များအဘို့အထိပ်လမ်းအကြောင်းကိုသုံးပုံနှစ်ပုံကိုတက်နိုင်မ handrail အတူလှေကားရှိပါတယ်. ရွှေတိဂုံဘုရားအတိတ်ကာလများလွန်းငလျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုခံစားခဲ့ရထားပါတယ်ကြောင့်ထိပ်အပေါင်းတို့သည်လမ်းကိုတက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ. ဒါဟာထပ်မံဖွင့်သွားကြဖို့လည်းအန္တရာယ်ယူဆနေသည်. တောင်မှဒီအမြင့်ထံမှသင်တို့အကြီးအအမြင်များနှင့်ဓာတ်ပုံအခွင့်အလမ်းများရ.
သင်လှေကားဒေသခံ Bhuddist ဘုန်းတော်ကြီးများအားဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းရှေ့အုတ်ရိုးသည်အလယ်၌သေးငယ်တဲ့နတ်ကွန်း functioning တကိုသွားဆင်းပြီးနောက်. အဆိုပါဘုရားကျောင်းအပြင်ဘက်တွင်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်ပေါ်မှာအနည်းငယ်မရနိုင်ပါဘူးခေါင်းလောင်းရှိပါတယ်.
ထိုနောက်မှသင်တဝိုက်လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ် 450 ခြေလျင်စတုရန်းကျန်ကြွင်းသောအရပ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောထောင့်ကနေတပြင်လုံးကိုစေတီတော်တွေ့မြင်, အလွန် photegenic ဖြစ်ပါသည်. သူတို့အပျက်အစီးအပြည့်အဝရှိပါတယ်အဖြစ်ညာဘက်ဖွဲ့စည်းပုံဆန့်ကျင်အထက်ပိုင်းကျန်ကြွင်း walkable မဟုတ်, သို့သော်အောက်ပိုင်းကျန်ကြွင်းသောအရပ်တစ်ခုလွယ်ကူသောလမ်းလျှောက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါငလျင်အဆောက်အဦးတည်ဆောက်ပုံ၌ကြီးသောမျက်ရည်ငှားရှိသည်ဘယ်မှာနှစ်ဖက်စလုံးနှင့်နောက်ဘက်ကနေသင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်.
ရှေ့မှာအဓိကနတ်ကွန်းအပြင်, ဖွဲ့စည်းပုံ၏အသီးအသီးအခြမ်းမှာလည်းအလားတူကွန်းအဘို့ဖြစ်ရပြီမယ်လို့အထဲတွင်ကြီးမားတဲ့နယ်ပယ်ရှိပါတယ်, အတွင်းပိုင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်တံခါး. သင်တို့သည်ဤအစက်အပြောက်ဖို့အဓိကကျန်ကြွင်းသောအရပ်မှတက်လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်. ဒါဟာသန့်ရှင်း Bhudda ရှေးဟောင်းပစ္စည်းသျောပေးသောအဓိကပြည်တွင်းရေးအခန်းတစ်ဦးနတ်ကွန်းရှိကွောငျးကိုအစီရင်ခံထားသည်ပေမယ့်အခန်းထဲက၎င်းကာလအတွင်းပြိုကျ 1839 ငလျင်.
သင်အကြီးအကျယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာန်းကျင်ပတ်အဖြစ်သင်စေတီတော်လွှမ်းခြုံသောအပြင်ဘက်မြို့ရိုးကိုမြင်နိုင်ပါသည်. တစ်ခုချင်းစီကိုဘက်တဦးတည်းရဲ့အဓိကဝင်ပေါက်များနှင့်နှစ်ဦးကိုသေးငယ်သူတွေကိုရှိပါတယ်, အဓိကတစျခုအသီးအသီးသောမြို့ရိုးအတွင်းနတ်ကွန်းဆန့်ကျင်ဘက်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါသည်.
သေးငယ်တဲ့ဒေသခံစျေးကွက်၏မျက်နှာစာမှာရှိပါတယ် မင်းကွန်း Pahtodawgyi. သင်တစ်ဦးလက်တွေ့ကျတဲ့ souvenier ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်လက်တော်ယက်ရေပုလင်းကိုင်ဆောင်သူထုတ်စစ်ဆေး, အလွန်နေရာလေးကို. ရွှေတိဂုံဘုရားအနားမှာတစ်ဦးလမ်းကြားကဆင်းပြေးစျေးဆိုင်တစ်ဦးထက်ပိုသောယခုလက်ရှိတွင် set ကိုလည်းရှိပါသည်.
မင်းကွန်း Pahtodawgyi စေတီတော်ခေါင်းထိပ်မှသည်မြောက်ပိုင်း၏အဓိကလမ်း 100 အထိမင်းကွန်းဆရာတော်အောက်မေ့ဖွယ်စေတီတော်မှ.